Bhatani Fusion Machines Vagadziri, Vatengesi - China Garo Fusion Machines Fekitori
Kunyorera uye Feature SUD1200H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kunyorera uye Feature SUD1000H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kunyorera uye Feature SUD800H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kunyorera uye Feature SUD630H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kunyorera uye Feature ► Inokodzera bota kuwelda yepurasitiki pombi uye zvigadzirwa zvakagadzirwa ne PE, PP uye PVDF zvinhu. ► Inosanganisira yakakosha furemu, hydraulic unit, kuronga chishandiso, kudziyisa ndiro, tswanda & sarudzo sarudzo. ► Inobviswa PTFE yakavharwa kupisa ndiro ine yakanyanya chaiyo tembiricha yekudzora system. ► Low kutanga kumanikidza chechokwadi yakavimbika nomoto unhu pombi diki. ► Chinogona kuchinjika chinzvimbo chinogonesa kuwedzeredza fittings dzakasiyana nyore. ► Yepamusoro chaiyo uye inovhundutsa mita yekumanikidza ...
Kunyorera uye Feature SUD450H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye dhiri ...
Kunyorera uye Feature SUD400H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kunyorera uye Feature SUD250H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kushanda uye Feature SUD315H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kunyorera uye Feature SUD355H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...